कर्णालीमै मृत्युवरण गर्न तयार छु : डा. केसी
जुम्ला, २५ असार । आठ दिनदेखि जुम्लामा अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले सरकारले आफ्नो मागप्रति कुनै तदारुकता नदेखाएको भन्दै कर्णालीमै मृत्यु वरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘मेरो मृत्युले सरकारलाई सन्तुष्टि ...
काठमाडौं, २५ असार । चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अक्षरशः लागू गर्न ...
डा.केसी भन्छन् – माग पूरा नभए मर्न तयार छु !
काठमाडौँ, २४ असार । डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभए कर्णालीमै मर्न तयार रहेको बताएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका मागसहित अघिल्लो शनिबारदेखि आमरण अनशन बसेका केसीले कर्णालीका जनता र विद्यार्थीमाथि ...
कर्णाली चिनाउन पनि जुम्लामा अनशन !
काठमाडौँ, २४ असार । शिथिल मुद्रामा मुस्किलले बोल्न सक्ने अवस्था। ८ दिनदेखिको अनशनले स्वासप्रश्वासमा बाधा। छाती र मांशपेसीको दुखाइ। यस्तैयस्तै समस्याबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको सघन उपचार कक्षको शड्ढयामा ...
प्राण गए पनि प्रण तोड्दिनँ : डा केसी
काठमाडौं, २३ असार । अनशनरत डा गोविन्द केसीले प्राण गए पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लिएको प्रण नतोड्ने बताएका छन् । जुम्लामा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा केसीले पुरानै सम्झौताअनुसार आएको अध्यादेश ...
काठमाडौँ, १९ असार । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सुधारका लागि विभिन्न माग राखी १५ औं अनशन सुरु गरेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले तीन दिनदेखि ‘गैरन्यायिक नियन्त्रणमा’ राखेको खुलेको छ । कर्णाली स्वास्थ्य ...
केसीको गिरफ्तारीप्रति काँग्रेसको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जुम्लामा गरिएको प्रा डा गोविन्द केसीको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । सरकारका गलत कर्मको विरोध गर्न संसद्, सडक या प्रेसमार्फतको प्रस्तुति बिल्कुलै स्वाभाविक हुन्छ भने ...
खोप लगाएका बालबालिकाको २४ घन्टाभित्रै मृत्यु !
काठमाडौँ, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले खोप लगाउने क्रममा सरकारी निकायबाट लापरबाही गर्दा ज्यान गुमाएका चार बालबालिकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। डोटीमा नौ ...
डा. केसीको १५ औं अनशन जुम्लामा अाजबाट
काठमाडौं, १६ असार । डा. गोविन्द केसी शनिबारबाट अनशन बस्ने भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरूपमा तत्काल जारी गर्न माग गर्दै डा. केसी अनशन बस्न लागेका हुन् । उनको यो ...
भाइरलको जोखिम, पत्तै नपाइ जान सक्छ ज्यान
काठमाडौं, १६ असार । सामान्य ज्वरो अनुभव भएपछि दुई दिनअघि मात्र जँचाउन अस्पताल गएका पत्रकार यादव थपलिया एकाएक सघन उपचार कक्ष (आईसियू) मा पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो । भाइरल इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण ...
ललितपुर, १५ असार । ललितपुरको ७१ प्रतिशत खानेपानी स्रोतमा दिसाजन्य पदार्थ कोलिफर्म भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरे ३ महिनायता गरेको खानेपानी गुणस्तर निगरानीमा यस्तो भेटिएको हो । कोलिफर्मका साथै खानेपानीमा आर्सेनिक, ...
छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरले दुर्गममा पाँच वर्ष सेवा गर्नुपर्ने
काठमाडौ,१४ असार । सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले दुर्गममा गर्नुपर्ने सेवा अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ । दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव हुँदा पनि सरकारी कोटामा पढेका डाक्टरले समेत सेवामा खटिन नमानेपछि ...
वीरगन्ज, १० असार । पर्साको पोखरीया जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष छ । तर त्यहाँ शल्यक्रिया हुँदैन । अस्पतालका नर्सहरू सुत्ने कोठा र खाना पकाउने भान्साका रूपमा ती कक्ष प्रयोग हुने गरेका छन् ...
काठमाडाैं, ९ असार । डाक्टर बिरामीको उपचारमा अहोरात्र खटिन्छन् । दैनिक सयौँ बिरामी जाँचेर स्वस्थ रहने उपाय पनि सुझाउँछन् । तर, दुनियाँलाई स्वस्थ राख्न योगदान पु-याउने डाक्टरकै स्वास्थ्य पनि पूरै ठीक भने ...
७४ प्रतिशत जारको पानीमा हैजाको जीवाणु
काठमाडौं, ६ असार । सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई) भेटिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले गरेको अध्ययन, परीक्षणमा करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा ...
राजविराज : राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामनारायण यादव प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको खुलेको छ । विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका ...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोसँग अरजबैजानको राजधानी बाकुमा भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बिहीबार त्यसतर्फ जान लागेका प्रधानमन्त्री ...
आत्महत्या गर्ने धम्की दिएर एक युवतीले ठगिन् दुई युवकबाट लाखौं